बुधबारदेखि पञ्चकन्या माईको शेयर कारोबार सुरु ! – Everest Dainik – News from Nepal
बुधबारदेखि पञ्चकन्या माईको शेयर कारोबार सुरु !
काठमाडौं, असोज २४ । असोज २४ गते बुधबारदेखि पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावरको नेपाल स्टक एक्सचेञ्चमा शेयर कारोबार सुरु भएको छ ।
शेयर बाँडफाँड भएको साढे दुई महिनापछि कम्पनीको शेयर सूचीकरण पश्चात कारोबार खुलेको हो । नेप्सेले कम्पनीको शेयर करोबारका लागि ‘पीएमएचपीएल’ संकेत प्रदान गरेको छ ।
बुधबारबाट यही संकेतमा कम्पनीको कारोबार सुचारु हुने छ । पञ्चकन्याको पहिलो कारोबारका लागि स्टक एक्सचेञ्जले १०२ रुपैयाँ ४९ पैसादेखि ३०७ रुपैयाँ ४७ पैसासम्म कारोबार रेन्ज प्रदान गरेको छ । यही रेञ्जबाट कम्पनीको पहिलो शेयर कारोबारको थालनी हुनेछ ।
कम्पनीको पहिलो कारोबार १६० रुपैयाँबाट सुरु भएको छ । समाचार तयार पार्दासम्म प्रतिकित्ता शेयर १४४ रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ ।
धितोपत्र बोर्डको पछिल्लो व्यवस्था अनुसार कुनैपनि कम्पनीको शेयर बाँडफाँड भएको एक सातामै सूचीकरण गरेर कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था भैसकेको छ । पञ्चकन्या माइको भने समयमै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न नसक्दा कारोबारमा ढिलाई हुँदै आएको थियो ।
पञ्चकन्या माइले गत साउन १ देखि ४ गतेसम्म ११ लाख कित्ता आइैपिओ निष्काशन गरेर साउन ११ गते बाँडफाँड गरेको थियो । जसमध्ये ४ प्रतिशत बराबरको ४४ हजार कित्तना कर्मचारीहरु तथा पाँच प्रतिशत अर्थात ५५ हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याएर १० लाख एक हजार कित्ता आम सर्वसाधारणमा बाँडफाँड गरको थियो । मेरोलगानीबाट